Waa maxay kaalmeynta? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks accessoriness
Waa maxay kaalinta?
Haddii aad rabto inaad amaahato deyn, waxaad u baahan tahay dammaanad.
Sidaas awgeed waa inaad dammaanad qaadataa. Baanku wuxuu rabaa dammaanad gaar ah, waxaana jira suurtagalnimada a dammiin ama deyn. Intaa waxaa dheer, waxaad kaloo bixin kartaa rahaad, haddii aad rabto inaad ku qadato deynta. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad la tashataa lataliyaha bangiga si aad u hesho sharaxaad cad. Dhammaan saddexda fursadood way fiican yihiin, laakiin haddii aad u aragto in kiiskii ugu xumaa hantida loo iibiyo si loo daboolo qiimaha deynta iyo bangigu had iyo jeer wuxuu u taagan yahay liistada diiwaanka dhulka, markaa ma ahan mid aad u wanaagsan. Waxaad heleysaa warqadda diiwaangelinta dhulka haddii aad u oggolaato qof diiwaangaliya mulkiilaha labaad.
Markaa si dhakhso leh ayaad u arki kartaa inta amnigu yahay. Qof kasta oo raba inuu damaanad qaado wuxuu u baahan yahay hay'ad samaysa damaanadqaad. Muhiim u ah accessoriness had iyo jeer waa inay bixiyaan macluumaad ku filan. Mid ka mid ah waa in aysan jirin xaalad wax calaamad ah oo buluug ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xusuusto ilaha dhaqaalahaaga. Tani waxay si dhakhso ah u caddayneysaa in aad awooddo inaad amaahan kartid wixii deyn ah. Haddii aadan hubin, waxaa laguu sheegi doonaa bangiga. Xirfadlaha ma aha waajibaad ah in la bixiyo, laakiin si kastaba ha ahaatee heshiiska ayaa la galayaa, taas oo si cad ujirta lacag bixinta. Badanaaba waxaad heli kartaa deyn haddii aad leedahay dammaanad. Sidaas darteed waxaad iibsan kartaa guri cusub oo si toos ah ugala wareegaya deyn. Ama waxaad si fudud u weydiisan kartaa damaanad. Waxaa jira bangiyada arrintan haddii aadan rabin inaad is-xakameyso saaxiibtinimada. Waxa kale oo suurtagal ah in aad saaxiibo weydiisato damaanad.
Badanaa, si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah ayaa ka codsanaya goobahooda reerkooda
Xirfadlayaashu waa sida dusha sare ah oo faa'iido u leh bangiga. Waa muhiim in bangigu mar walba si dhaqso ah dib ugu soo celiyo lacagtooda. Haddii aadan bixin karin qiimaha deynta, markaa guriga ayaa la qabtaa. Ama qofka lacagta ku siiyay waa inuu dib u bixiyaa amaahda. Nasiib darro, qiimaha ma aha mid waxtar badan. Xaaladda qalabka, inta badan xiritaanka ayaa la gaarayaa. Ereygan waa in marka hore la qeexaa. Mid waa inuu hubiyaa dammaanad-yaqaan inuu ogaanayo waxa uu qabanayo. Waa inuu awood u yeesho inuu saaxiibo la yeesho fikradda. Sidaa darteed waa ogolaansho waa hab muhiim ah nidaamka deynta. Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, waxaad la xiriiri kartaa lataliyahaaga bankiga. Waxay badanaa ku saabsan tahay waxyaalaha aad isticmaali kartaan sida dammaanadda. Xitaa baabuurta ama alaabo kale oo tayo sare leh ayaa la isticmaali karaa.
Xaaladdan oo kale qalabku wuxuu ku xiran yahay suuxdin. Dabcan khidmadaha ma aha oo kaliya inay door muhiim ah ka ciyaaraan iibsashada guriga. Xitaa haddii aad qorsheyneyso inaad bilowdo shirkad, ereygan wuxuu soo galaa ciyaar. Sidaa darteed, waad arki kartaa, way fududahay hadda ka hor inta aanad maarayn maaliyadaha. Si kastaba ha noqotee, dhammaan mashaariicda waa in si fiican loo qorsheeyaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaad leedahay faa'iidooyinka gacantaada oo aad la socon kartid. Waa inaad hubisaa in qorshayaashaadu had iyo jeer yihiin tiirar wanaagsan. Intaa waxaa dheer, ilaalinta credit fiican waa mar walba qiimo leh. Haddii aad deyntii hore u haysatid intii suurtagal ah, waxaad si dhaqso ah u bixin kartaa lacagta. Waa inaad kaliya ka amaahan kartaa bangiga xaalad degdeg ah. Sidaas darteed, hubso inaadan wax qalad ah sameyn oo aad si degdeg ah u ogaatid waxa lagaa rabo inaad dib u bixiso.
Maqaalka horeDeynta AAA
Maqaalka xigtadamaanad deficiency